पेप्सीड बनाम Zantac: मुख्य भिन्नता र समानताहरू - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य प्रेस खेलहरु कम्पनी समुदाय, कम्पनी कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट औषधि जानकारी समाचार, कल्याण औषधि बनाम मित्र
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> पेप्सीड बनाम Zantac: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
पेप्सीड बनाम Zantac: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
अप्रिल २०२० मा, एफडीएले Zantac को रिकल गर्न अनुरोध गर्‍यो। अझै सिक यहाँ । अप्रिल २०२० मा, एफडीएले Zantac को रिकल गर्न अनुरोध गर्‍यो। अझै सिक यहाँ ।
Zantac एफडीए द्वारा फिर्ता बोलाइएको छ। कुन औषधि तपाईंको लागि सही छ भनेर आफ्नो डाक्टरसँग परामर्श लिनुहोस्। रिकलको बारेमा थप पढ्नुहोस् यहाँ । मूल पोष्ट जानकारीमूलक उद्देश्यका लागि मात्र सुरक्षित गरिएको छ।
पेपसीड र जान्ट्याक ब्रान्ड नामका औषधीहरू हुन् जुन अन्य पाचन अवस्थाहरूको बीचमा ग्रहणी र गैस्ट्रिक अल्सरको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। दुबै औषधीहरूले पाचन प्रणालीमा हिस्टामाइनको कार्य रोक्न समान तरिकाले कार्य गर्दछ। एन्टीहिस्टामाइन्सको रूपमा, तिनीहरूले अन्ततः एसिडको उत्पादन कम गर्दछन्। उनीहरूको समानताहरूको बाबजुद पनि उनीहरूसँग समीक्षा गर्न केहि भिन्नताहरू छन्।
पेप्सिड फोटोटीडिनका लागि ब्रान्ड नाम हो। एसिडको उत्पादन कम गर्न र जलन रोक्नको लागि यो एन्टिहिस्टामाइनको रूपमा काम गर्दछ। पेप्सिड GERD, पेट अल्सर, एसोफैगिटिस, र अन्य पाचन अवस्थाहरू जस्तै उपचार गर्न अनुमोदन गरिएको छ। यसले कहिलेकाँही दुखाइको पनि उपचार गर्न सक्छ।
sildenafil २० मिलीग्राम भ्याग्रा जस्तै छ?
Pepcid १० मिलीग्राम, २०mg, र mg० मिलीग्राम मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा आउँदछ। प्रयोग गरिएको खुराक उपचार भइरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ। जे होस्, यो केहि केसहरूमा weeks हप्ता सम्म दिनको एक पटक भन्दा बढी लिन सक्दछ।
Zantac यसको सामान्य नाम रान्टीडाइन द्वारा पनि चिनिन्छ। यसले पेटमा एसिड उत्पादन रोक्दछ हिस्टामाइन रिसेप्टर्सलाई रोक्न। Zantac GERD, पेट अल्सर, erosive esophagitis, र अन्य पाचन अवस्थाहरूको उपचार गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
Zantac मौखिक ट्याब्लेट को रूप मा उपलब्ध छ 75 75 मिलीग्राम, १ 150० मिलीग्राम, र mg०० मिलीग्राम। यो दैनिक एक वा दुई पटक लिन सकिन्छ जबकि खुराक तपाइँको अवस्थामा निर्भर गर्दछ। Zantac, अन्य समान औषधि जस्तै, सामान्यतया लामो अवधि को प्रयोग गरीदैन।
बिहान एक ह्या hang्गओभर कसरी प्राप्त गर्ने
Pepcid vs Zantac साइड साइड साइड तुलना
पेप्सिड र जान्टाक दुई समान औषधीहरू हुन् जुन धेरै समानताहरू र भिन्नताहरूसँग छ। तिनीहरूको सुविधाहरू तल तुलना तालिकामा फेला पार्न सकिन्छ।
हिस्टामाइन (H2) अवरोधक
Mylan / Sanofi / कुराकानी
निलम्बनका लागि मौखिक पाउडर
60 १ 20 20०, २० मिलीग्राम ट्याब्लेटका लागि
600०० a०, १ 150० मिलीग्राम ट्याब्लेटको आपूर्तिको लागि
पेप्सिड गर्भावस्था कोटि बीमा छ। यसले भ्रुण क्षतिको लागि जोखिम पैदा गर्दैन। गर्भावस्था वा स्तनपानको योजना बनाउने हो भने कदम चाल्न डाक्टरको परामर्श लिनुहोस्।
Zantac गर्भावस्था कोटि बी मा छ। यसले भ्रुण क्षतिको लागि जोखिम पैदा गर्दैन। गर्भावस्था वा स्तनपानको योजना बनाउने हो भने कदम चाल्न डाक्टरको परामर्श लिनुहोस्।
पेप्सीड र जान्ट्याक दुई औषधि हुन् जुन ग्यास्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर, जीईआरडी, र जोलिन्जर-एलिसन सिन्ड्रोमको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ। दुबै औषधिहरूले पेटमा एसिडको उत्पादन घटाउन हिस्टामाइन रिसेप्टर्स रोक्दै काम गर्दछ।
Pepcid र Zantac काउन्टरमा किन्नु सकिन्छ र मौखिक ट्याब्लेटको रूपमा लिन सकिन्छ। तिनीहरूसँग कार्यको समान अवधिहरू छन् यद्यपि खुराक उपचार गरिरहेको अवस्थामा निर्भर गर्दछ। दुबै औषधीको पनि यस्तै साइड इफेक्टहरू छन् जस्तै टाउको दुखाइ, पखाला, चक्कर आना, कब्ज र दाने।
Zantac र Pepcid विभिन्न औषधीहरु संग कुराकानी यो सावधानी संग प्रयोग गरीनु पर्दछ जब अन्य औषधिहरु लिईन्छ।
यो जानकारी दुई ओभर-द-काउन्टर औषधिहरू बीच समानता र भिन्नताहरू बुझाउनको लागि हो। कुन औषधि तपाईंको लागि उत्तम हो भन्ने निर्धारण गर्न चिकित्सक वा अन्य स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग सल्लाह लिनुहोस्।
के म सिंगलकेयर प्रयोग गर्न सक्दछु यदि म मेडिकेयरमा छु?
Xiidra vs. Restasis: मतभेद, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
४ effective घण्टा पछि tamiflu कसरी प्रभावकारी छ
के दुखाइ रिलीभर तपाईं meloxicam संग लिन सक्नुहुन्छ?
मलाई कसरी थाहा छ म ल्याक्टोज असहिष्णु हुँ?
Cialis लिए पछि कति समय म भ्याग्रा लिन सक्छु
मलाई राती किन धेरै रुघा लाग्यो?
कति मानिसहरु चिन्ता विकार बाट ग्रस्त छन्